Adeegga Mashruuca - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Mashruuca iyo xubnaha kooxda taageerada farsamo waxay leeyihiin celcelis ahaan in ka badan shan sano oo waayo-aragnimo ah iyo guud ahaan bedka duulimaadka ee ka badan 1500 kiiloomitir laba jibaaran. Si loo hubiyo tayada natiijooyinka, waxaanu ku qalabaynay shaqaale kasta oo mashruuc leh kamarad farsamo oo heer sare ah oo ay soo saartay Rainpoo. Waqtigan xaadirka ah, kooxdayada mashruucu waxay fulisaa adeegyo ay ka mid yihiin duulimaadka sawir qaadista, habaynta xogta qaabaynta 3D, iyo qaabka 3D wax ka beddelka.
Haddii aad haysatid mashruucyo ay ka mid yihiin Sahanka/GIS/Smart City/Dhismaha/Macdanta Dalxiiska/Dhismaha qadiimiga ah ee ilaalinta/Amarka Degdegga ah oo aad u baahan tahay inaad qabato shaqooyinka qaabaynta 3D, laakiin aadan haysan qalab ama rag khibrad leh, waxaanu kaa caawin karnaa inaad dhammaystirto hawlahan qiimo macquul ah.
Nala soo xidhiidh >
Waxaan leenahay koox kombuyuutar ah oo ka kooban in ka badan boqol kombiyuutar waxaana ay shaqeyn kartaa in ka badan 500,000 markiiba.
Haddii aadan xamili karin tirada badan ee xogta sawirka, iyadoo lagu saleynayo dammaanad qaadka tayada iyo saxnaanta qaabka 3D, waxaan kaa caawin karnaa habaynta xogtaas qiimo macquul ah.
Shirkaddayadu waxay leedahay waaxda taageerada farsamada kamaradaha, taas oo ka kooban injineerada taageerada farsamada ee ugu khibradda badan. Celceliska waayo-aragnimada taageerada xubnaha waa in ka badan 3 sano. Ka dib marka la keeno kamarada, shirkadeena waxay u diri doontaa macmiilka injineer taageero farsamo oo xirfad leh si uu u tababaro isticmaalka kamarada si loo hubiyo in hawlwadeenadu u isticmaali karaan kamarada si xirfad leh.
Sidaa darteed, haddii aad wax dhibaato ah kala kulanto isticmaalka kamarada, waaxda taageerada farsamada ayaa bixin karta adeegyo. Intaa waxaa dheer, macaamiil kastaa wuxuu leeyahay hal-hal maareeyaha adeegga macaamiisha. Haddii aad leedahay baahiyo adeeg oo farsamo, waxaad had iyo jeer la xiriiri kartaa maamulaha adeegga macaamiisha, waxaan ku farxi doonnaa inaan ku caawinno.
Taageerada iibka kahor
Waanu aqbalnaa martiqaadka bandhigga adduunka oo dhan. Haddii aad xiisaynayso kamaradahayada, ha ka waaban inaad nala soo xidhiidho oo aad hesho fursad demo.
Ka dib iibka
Waxaan aaminsanahay in badeecado aad u fiican iyo shaqaale khibrad leh ay siin karaan adeegyo qumman macaamiisheena.
Waayo-aragnimada isticmaale ayaa had iyo jeer ahayd diiradda Roobka. Si looga jawaabo si deg deg ah baahida isticmaalayaasha, Rainpoo waxay dejisay qorshe iibka ka dib, degdeg ah iyo qorshayaal qiimo leh si wax looga qabto dhibaatooyin kala duwan oo lama filaan ah loona daboolo baahiyaha isticmaaleyaasha. Kooxda dayactirka kamaradaha xirfadlayaasha ah, kooxda taageerada farsamada, kooxda tijaabinta kamarada, si loo hubiyo tayada sare iyo heerka sare ee kamarad kasta oo annagu soo saarno. Waa hadafka daa'imka ah ee Roobabku inuu siiyo isticmaalayaasha alaabada iyo adeegyada ugu fiican.